Bishaara Dadka Qaba Cudurka Kalastaroolka | Xaqiiqonews
Bishaara Dadka Qaba Cudurka Kalastaroolka
Kalastaroolka ma ahan mid u hadidaya caafimaadkaada sida aad u maleyso, mana ahan mid had iyo jeer keena Wadana-xanuun.
Dad badan ayaa qaata daawooyin aanu ku fadhin wax faa’ido ah, si ay iskaga yareeyaan Kalastaroolka, laakin ma ogtahay daawooyinkaasi in ay leeyihiin saameyn aan wanaagsaneyn.
Waxaa laga yaabaa in aad la yaabantahay sababta dhaqaatiir badan ay wili kuu siinayaan macluumaad qaldan xilli dunida ay ku jirto qarniga 21aad.
U fiirso, hadii aad ogaato faa’idooyinka xad ka baxa ee lagu qiyaasay balaayiinta Doolar ee shirkadaha daawooyinka ay sanad walbo ka helaan Daawoowyinka loo isticmaalo Kalastaroolka, waxaad ogaan doontaa sababta aad u qaadato daawooyin aan faa’ido laheyn.
Waxyaabo la qariyey 40 Sano !
Todobmaatameeyadii waxaa la sameeyey daraasad ku saabsan Kalastaroolka-ogow xilligaasi waa waqtigii Kalastaroolka uu noqday cudur si gaar ah loo daweeyo.
Sidoo Kale AqrisoCudurkan-waa-kan-ugu-badan-ee-ay-u-dhintaan-cirbixiyeenada!
Waxyaabaha cajiibka ahse waxaa ka mid ah in daraasadaasi la qariyey natiijadeeda ilaa sanadkii 2016 oo lagu faafiyey majaladda British Medical Journal.
Daraasadihii la sameeyey ayaana isku raacay in “kalastaroolka uusan sababin cudurada wadnaha” waxaana far waaweyn lagu muujiyey erayadan “dhamaan waxyaabihii aan ka aaminsaneen Kalastaroolka waxa ay ahaayeen Qalad”.
Waxyaabaha yaabka leh waxaa ka mid ah dalka Japan oo kale waxa aad u siyaaday heerka Kalastaroolka marka loo bar bar dhigo waqtiyadii hore, sidaasi oo ay tahayna waxaa kor u kacay heerka “Noolsha dheer” gudaha Japan, waxaad u maleysaa in reer Japan ay na leeyihiin “Markasta oo Kalastaroolka xun nagu sii bata cumriga waa uu dheeraadaa1”